Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Ambatofinandrahana: Notafihin’ny dahalo ny renivohitry ny distrika
Rechercher Valider	Ambatofinandrahana: Notafihin’ny dahalo ny renivohitry ny distrika	Imprimer	Nidiran’ny dahalo ny renivohitra ny distrikan’Ambatofinandrahana ny alarobia alina mifoha alakamisy faha 16 martsa 2017 tokony ho tamin’ny misasakalina. Tao amin’ny “secton-4”, na Atsinanan’i Vazaha no nitranga ny fanafihana. Lasibatra tamin’izany ny ombin-dramatoa Raberthe mianakavy izay miisa 16. Voalazan’ny loharanom-baovao fa dahalo eo amin’ny 60 lahy no tonga nanafika ity renivohitra ny distrika ity raha ny fahitan’ireo nanatri-maso. Nosakanan’izy ireo avokoa ny làlana miditra ao amin’ny tanàna, ka nataony toa ny miaramila manao fahirano ireny ny làlana mivoaka sy ny miditra. Tsy afa-nihetsika ny vahoaka noho izany. Dahalo eo amin’ny folo lahy isaka ny toerana no niambina ny vahoaka tsy hihetsika. Mba nivoaka ny trano ihany ny tao amin’i Doda mpivaro-kena ka tifitra variraraka no nahazo azy. Soa ihany fa tsy nahavoa azy ireo izany. Rehefa izany, dia nandihizan’ireto dahalo ireto tanteraka ny tanànan’Atsinanan’i Vazaha. Marihina fa ity tanàna ity no misy an’i Jesy Rabelaolao mpanao gazety, ary nisy dahalo koa niambina teo anoloan’ny tranony. Poa-basy tsy nifandrenesana intsony no nisy nanerana ny tanàna. Tsy nisy sahy nivoaka ny “section” hafa manodidina, raha naheno ny poa-basy. Lasan’ny dahalo avy ny ombin’ity Raberthe ity. Nojerena fotsiny hoy ny fitenenana. Fa nankaiza ny zandary sy ny pôlisy tao Ambatofinandrahana ?
Mila 500 m amin’ny kaomisarian’ny pôlisy no nisy ity fanafihana namaivay ity, ary eo amin’ny 800m miala ny tobin’ny zandarimaria izay ipetrahan’ny komandin’ny kaompania ao Ambatofinandrahana. Efa ora iray taty aorian’ny fanafihana vao tonga ireo mpitandro ny filaminana ireo. Ny omby efa lasa lavitra ary ny fokonolona sasany mba lasa nanaraka ny dian’omby ihany. Ny filazana azonay tamin’ny finday ny alin’io andro io 10 minitra taorian’ny fanafihana no nahalalanay fa mitady vonjy mafy ny mponina aty Ambatofinandrahana fa nidiran’ny dahalo ny renivohitra. Tsy misy mamaly amin’ny telefaonina na ny finday ny mpitandro filaminana izay nantsoina na pôlisy izany na zandary. Niantso ny laharana maitso 119 an’ny zandarimaria aty Antananarivo ihany izahay, tokony ho tamin’ny 1ora alina mahery 10 min teo ho eo. Manontany tena ny amin’ny fiasan’ny zandary sy ny pôlisy any amin’ity distrika ity ny vahoaka amin’izao fotoana izao. Misy ny milaza ireo zandary ireo rehefa hanara-dia omby sy mifanena amin’ny dahalo izay manao hoe: “ mitandrema ihany, fa mbola madinika ny kilonga”. Dia miala tsy mety mifandona amin’ny dahalo intsony izy ireo. Na koa ialan’izy ireo ny fanarahan-dia omby rehefa akaiky ny dahalo. Ny tena manahirana amin’ny raharaha dahalo sy zandary any Ambatofinandrahana ity dia ny fahaverezan’ny omby tao amin’ny “fourrière” tao amin’ny lakazeran’ny zandary manoloana ny biraon’ny kaomandin’ny kompania tao Ambatofinandrahana tamin’ny volana aogositra 2016 lasa teo iny. Na ny tobin’ny zandary aza idiran’ny dahalo fa indrindra fa ny tanàna. Moa ve tsy hisy tsikombakomba amin’ny mpitandro filaminana ity raharaha ny asan-dahalo be any Ambatofinandrahana renivohitra sy ny manodidina azy ity? Tamin’ny komandin’ny kaompania ny zandary teo alohan’izao dia marihina fa tsy toa izao ny fitandroana ny fandriam-pahalemana ao Ambatofinandrahana ary tsy nosahin’ny dahalo nidirana ity tanàna ity. Maro ny olana mametraka fanontaniana amin’izany amin’izao fotoana izao. Sao dia efa tokony ho soloina ity mpibaiko ny zandary any Ambatofinandrahana ity? Ny zavatra toa izao no mahatonga ny olona hanaonao foana eo anatrehan’ny mpitandro filaminana ka ipoiran’ny fanjakam-bahoaka. Enga anie ka tsy hisy izany, nefa tokony handray andraikitra ny fanjakana mba hisorohana izany diany mbola aty amboalohany.
Marihina fa tao anatin’ny herinandro dia fanafihana tsy an-kijanona no nahazo ny fokontany tao Tetikanana izay miala 2km monja ny renivohitra sy ny fokontany ao Ambolomborona izay miala 500 m ny tobin’ny zandarimaria. Tsisy afa-maina tamin’ny dahalo nandritra ny volana febroary manontolo iny ireo fokontany roa ireo. Tontakely sy fanafihana mitam-piadiana avokoa no mitranga amin’izany, nefa toa jeren’ny mpitandro filaminana fotsiny ihany. Tena natao hiaro ny vahoaka sy ny fanany marina ve ny zandary sy ny pôlisy? J.B.